MM3XPL0IT လုံခြုံရေး Tool v1.2 — MYSTERY ZILLION
MM3XPL0IT လုံခြုံရေး Tool v1.2
January 2010 edited November 2010 in Sharing
ဒီနေရာမှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် version 1.2 ပေါ့...
မြန်မာ GUI လေးတွေနဲ့ အခုလို ရေးပေးတာကို သဘောကျတယ်။ အခြား member များလည်း download ချစမ်းပြီး feedback ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်မှ Download ချပြီး Windows ပေါ်မှာ စမ်းကြည့်လိုက်မယ်။
ကျနော်လည်း ကြိုက်တယ်ဗျာ.... အားပေးတယ်.... သဘောကျတယ်...
ဟဲဟဲ..ဒီဟာနဲ့ ကျွန်တော့်ညီစက်မှာ သွားပြီး ဟိုဟာဖျောက် ဒီဟာဖျောက် လုပ်လိုက်တယ်။ Folder option တွေဘာတွေ..အဲဒါတွေကို လွယ်ကုူလျင်မြန်စွာဖျောက်လို့ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် desktop မှာတော့ အကို့ program shortcut icon တစ်ခုတိုးသွားပြီပေါ့။ မြန်မာ ပရိုဂရမ်တွေရဲ့ icon တွေ desktop မှာ ပြည့်နေတာကို ကျွန်တော်က အရမ်းသဘောကျတယ်..
အခုလို ကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ.........
a ko yay. Linkatit lay nal`pyan tin pay bar lar? Kyon taw twar download mal lote tot file ma shi tot woo tal`.
Kyaw Thu Han wrote: »
Burglish လုံးဝခွင့်မပြုပါ တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ပါသည်။ ဗမာလိုရေးလိုကရေးပါ ဗမာလိုမရိုက်တတ်ပါက အင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုရေးနိုင်ပါသည်။
Brother , Mediafire က Invalid or delete file တဲ့ဗျ။ပြန်တင်ပေးပါဦး။ စောင့်မျော်လျက်